Wasiir “Doorashada waa inay ku dhacdaa waqtigeeda” (VIDEO) – Idil News
Wasiir “Doorashada waa inay ku dhacdaa waqtigeeda” (VIDEO)
Sii-hayaha Wasiirka Amniga ahna Xildhibaan Hon. Mohamed Abukar Islow Duale, oo khudbad ka jeediyay Shirweynaha wada-tashiga beelaha Mudulood ayaa sheegay inay lama huraan tahay in doorasho dalka ka dhacdo marka uu dhamaado waqtiga loogu tala-galay.
Wasiir Islow ayaa intaas ku daray “Waxan arkay xalay xildhibaano shiraya oo raba in 2 sano lagu darsado. Waxaan leeyahay kuwaas Riyada kakaca, Riyaad ku jirtaan. Doorashada waqtigeeda waa in lagu qabtaa”